Ugu Yaraan 92 qof Oo Ku dhintay Dhul Gariir Ku Dhuftay Jaziirado Kuyaal Indonesia.
Monday August 06, 2018 - 07:18:54 in Wararka by Super Admin
Dhul gariir xooggan ayaa ku dhuftay Jaziiradaha Lambork iyo Baali oo katirsan gobolka NUUSATINGAARA ee dhaca galbeedka wadanka Indonesia
Wakaaladda wararka ee wadankaas ayaa sheegtay in dadka ku dhintay dhul gariirkan ay gaarayaan 92 qof halka dhaawaca uu sii caga cageynayo ku dhawaad 250 ruux.
Dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday woqooyiga Jazeeradda Lombork oo aad ugu dhow goobta uu dhul gariirku ka dhacay, waxaana lagusoo waramayo in halkaas ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 87 qof oo Indonesian ah.
Wakaaladda qaabilsan la socodka dhul gariirada ayaa sheegtay in dhul gariirkan xoogiisa uu gaaray qiyaaska 7aad
ee Rekhterka oo ah qalabka lagu qiyaaso dhul gariirada.
Wazaarada gurmadka degdegga ah ee wadanka Indonesia ayaa sheegtay in la bilaabay gurmad loo fidinayo dadka wax ku noqday dhul gariirkan iyo qorshe dadka faraha badan loogasoo daabulayo goobaha laga cabsida qabo in mar kale ay wax ka dhacaan.
Waxa ay sheegtay in kumanaan dad ah lagasoo saaray dhismayaashii ay ka deganaayeen magaalooyinka waaweyn ee Jazeeradaha Lombok iyo Baali hadana la isugu geeyey, goobo banan oo aan dhismooyin lahayn, si looga fogaado in guryuhu ay kusoo dumaan.
Garoomada diyaaradaha ee Jazeeradaha Lombok iyo Baali ayuu dhul gariirku wax yeelo gaarsiiyeey waxaana adag in loo isticmaalo sidii horey loogu isticmaali jiray, taas oo sababeysa gaabis ku yimaada adeegyadii gurmadka ee lagaar siin lahaa deeganada ay wax ka dheceen.
Dadka ku dhaqan jazeeradaha uu dhul gariirka ku dhuftay ayaa sheegay in ay dareemeen gariirka dhulka ku dhawaad 24 jeer oo is xig xiga, taas oo sii kordhisay cabsida laga qabo inay markale uu goobahaasi kusoo laabto dhul gariir kale.
Goobaha ay hada ka dheceen dhul gariiradan ayaa kamid ah jazeeradaha loo dalxiiska tago ee wadanka Indonesia, balse dowlada wadankaas ayaa shaacisay in ilaa hada dadka dhintay aysan ku jirin wax ajaanib ah.
Dowlada waxa ay sheegtay in dhul gariirkan oo lagu qiyaasay inuu gaarayo 7 rekhter uu ka dhacay gudaha Badda, meel kahooseyso ugu yaraan 10 Km, taas oo dhalisay in Mowjado hirar ah oo waaweyn ay dhaliso Badda, waxa ayna dadka ugu baaqday inay ka fogaadaan xeebaha Jazeeradaha cabsi laga qabo in Tsunami hor leh uu ka dhoco goobahaasi.
Dhacdadan ayaa imaaneysa Hal 7aad kadib, markii dhul gariir noocaan ah uu ka dhacay isla goobta uu hada ku dhuftay, kaas oo sababay dhimashada 14 qof iyo dhaawaca 162 kale.
Wadanka Indonesia ayaa kamid ah meelaha ugu dhul gariirada badan dunida, waxaana la sheega in sanadkasta ay ka dhacaan 6Kun ilaa 7Kun oo dhul gariir, kuwaas oo cabirkooda uu udhexeeyo 3 ilaa 7 REKHTER oo ah cabirka lagu qiyaaso dhul gariirada.